Iran iyo quwadaha adduunka oo hadlaya - BBC Somali - Warar
Iran iyo quwadaha adduunka oo hadlaya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 18 Febraayo, 2014, 14:01 GMT 17:01 SGA
Xarunta Nuclear-ka ee Iran
Dowladda Iiran iyo Lixda dowladood ee dunida ugu awoodda badan ayaa waxaa u billawday wareegii ugu horeeyay ee wadahadal lagu doonayo in heshiis looga gaaro barnaamijka Nuclear-ka Iran ee muranka dhaliyay.
Maraykanka ayaa sheegay in wadahadalladu ay yihiin kuwa adag oo aanay jirin caddaymo muujinaya inay guulaysan doonaan.
Wadaxaajoodka ayaa la filayaa in lagu xoojiyo heshiis ku meel gaar ahaa oo bishii November la saxiixday.
Kobcinta Macdanta Yuraaniyamta
Heshiiskaas ayaa Iran ku ogolaatay inay joojiso kobcinta Macdanta Yuraniyamta.
Heshiiska kaddib waxaa Iran laga qaaday qeyb ka mid ah cunaqabataynta caalamiga ee saarneyd.
Iran iyo Mareykanka ayaa labaduba meesha ka saaray in heshiis deg deg ah la gaaro.
Xukuumadda Tehraan waxay weli sheegeysaa in qorsheheedu yahay inay yeelato awood nuclear oo si nabad ah loo adeegsada.
Iran: Ciidan ayaan u diraynaa Pakistan18 Febraayo 2014
Kerry: Cunaqabatayn yaan lagu soo rogin Iran14 Novermber 2013
Iran oo la heshiisay reer galbeedka24 Novermber 2013
13 Maarso 2014
Dad ku dhintay dibedbaxyada Turkiga